Bilaogera Frantsay iray voaheloka noho ny fitanany laharana tsara loatra tao amin’ny voka-pikarohan’i Google · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Frantsay iray voaheloka noho ny fitanany laharana tsara loatra tao amin'ny voka-pikarohan'i Google
Mety hahavoasazy ny mipoitra ho lohalaharana amin'ny voka-pikarohan'i Google!
Voadika ny 19 Novambra 2019 10:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, English, Español, Français
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka ny Jolay 2014)
Fureur de Lire 2009, sary an'i Michelle tao amin'ny Flickr, CC BY-NC-SA 2.0
Ireo bilaogera-mpanjifa mora misendoatra, izay handraraka ny hatezerany aminà trano fisakafoana iray nandiso fanantenana azy ireo ve izany dia tsy maintsy mitandrina manomboka izao ka hisafidy lohateny azo ampiasaina na aiza na aiza ho an'ny lahatsorany mba ahafahany mipoitra anatin'ireo halalina tsy hita mason'ny mili-pikarohana?
Toy izany ny zava-nanjo an'ilay bilaogera L'Irrégulière, voaheloka ny 30 jona 2014 teo ambaninà didy vonjimaika nataon'ny fitsaràna ady madio ao Bordeaux. Tafiakatra hatramin'ny 2.500 euros ny sazy azony noho ny fitarainanà trano fisakafoana iray tao Cap-Ferret. Tsiravina tamin'ny fandraisana sy ny fikarakarana mahonena izy araka ny voalazany, nandritra ny fisakafoanany tamin'ny faran'ny volana aogositra 2013, ka namoaka tsikera mandratra tao amin'ny bilaogy momba ny literatiora, Cultur'elle. Teo ambanin'ny lohateny manao hoe “L'endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino”, tafiakatra ho lohalaharana tao amin'ny vokatr'i Google io lahatsoratra io rehefa mikaroka ny anaran'ilay trano fisakafoana. Tezitra mafy ny tompony, ary nanome rariny azy ny fitsaràna, tsy noho ny votoatin'ilay tsikera, izay araka ny fitsaràna dia “mifototra amin'ny fahalalahana miteny”, fa noho ilay lohateny, izay tafalatsaka anatin'ny fanaratsiana.
Ilay bilaogera, izay tsy naka mpisolovava, ihany no nanala ilay lahatsorany, zavatra tsy nangatahan'ny fitsaràna taminy. Saingy azontsika vakiana ao amin'ny bilaogin'i tuxicoman eto, na amin'ny alalan'ny tahirin'ny cache ilay lahatsoratra. Diso fanantenana, nanapa-kevitra ny tsy hampiakatra ny fitsaràna izy.
Nanaitra ny maro ilay didy – vonjimaika, tsy nisoka-bava momba ny votoatiny ny fitsaràna – indrindra teo amin'ny lafiny lalàna. Nanoratra tao amin'ny Twitter, izay nisy namerina nibitsika in-100, ilay mpisolovava malaza sady bilaogera be mpamaky, Maître Eolas – manana mpanaraka 142.000 ao amin'ny Twitter :
— Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) 7 Juillet 2014 zzzzzzzzzz
Vaovao: misy trano fisakafoanana manenjika ny mpanjifany izay sahy mitsikera azy ireo. Mahita mpitsara hanome rariny azy moa ry zareo.
talohan'ny namoaboasany ilay raharaha, ho an'ny gazetiboky L'Express, tamin'ny endriny sy ny fiantraikany rehetra:
Tsy tokony omena sehatra mihoatra nóho izay ananany ity fanapahankevitra ity […] Misy ny zo hitsikera. Azo saziana izy ireo rehefa mihoa-pefy. Ny fahasamihafàna mahazatra dia rehefa misy fikasàna hamotika na hanao fifaninanana tsy ara-drariny raha ataonà mifanandrina io fanaratsiana io. Araka izany, raha nataon'olona iray mitàna trano fisakafoana iray hafa mpamokatra pizza ao Cap Ferret io lahatsoratra io, dia tafiditra anatin'ny tranganà fifaninanana tsy ara-drariny satria nisy fikasàna hanaratsy mba hampitsoaka ny mpanjifa. Eto anefa dia mpanjifa tsy faly ka mitantara ny tranga mampalahelo nahazo azy no misy. Manan-jo tanteraka isika hanazava ny antony tsy mahafa-po antsika, amin'ny fametahana izay lohateny tiantsika.
Rehefa naheno io raharaha io ireo bilaogera hafa, dia nanamarika voalohany indrindra ny fitohanan'ny fitsaràna, toa an'i Lady Waterloo :
Hay dia nomelohin'ireo mpitsara ity bilaogera mampalahelo ity, noho ny L'endroit à éviter au Cap Ferret: Il Giardino, tena mendrika ve izany? Tsy haiko. Raha manomboka mandray an-tànana ireo bilaogy izay manameloka ireo fanokafam-bavony taraiky tsy misy voanjo sy ny divay mangatsiaka loatra na mamay loatra, adinoko, halemy tanteraka ny Fitsaràna.
na ireo tsy fifankahazoan-dresaka miseho matetika eo amin'ny samy mpizahatany, mpanao sakafo sy aterineto, toa ny Le Parisien libéral :
Ny marina dia, ankehitriny, ny trano fisakafoana rehetra, ny trano fandraisambahiny rehetra, dia tsy maintsy mieritreritra ny fisian'ny Aterineto rehefa miasa. Maninona ny Il Giardino no tsy namorona ny vohikalany manokana na nanome lamosina ny tsikerra mandra-piandry ny fanehoaknevitr'ireo mpanjifa tia ilay trano fisakafoana, toa an'i Berthomeau, fa tsy manao dokambarotra goavana ho an'i l'Irrégulière.
Fanivanana ny Aterineto sy ireo voka-pikarohan'i Google
Voka-pikarohana Google momba ny “Il Giardino Cap-Ferret”, ny 18 jolay 2014 : takelaka mbola tsy miala – saripika avy amin'ilay mpanoratra
Afaka manonona ireo voka-pikarohana Google ve isika mba hanafihana bilaogera iray ? Toy izao ny fiarovan-tenan’ilay mpitana trano fisakafoana :
“Mety nisy hadisoana teo amin'ny fomba fiasa, miseho izany indraindray anatin'ny volana aogositra, tsy azoko lavina. Saingy niakatra tao amin'ny voka-pikarohana Google ity lahatsoratra ity ary nandratra hatrany hatrany ny tsenam-barotro […]. Azo atao ny mitsikera fa misy fomba fanaovana izany, anatin'ny fanajàna, izay tsy niseho teto. Ankehitriny namoaka didy ny fitsaràna ary ho ahy dia efa nikatona ny raharaha“
Raha ny marina, mbola tsara toerana ao amin'ny voka-pikarohana Google io lahatsoratra io sy ny adihevitra naterak'ilay didim-pitsaràna. Gaga tamin'ny olona nokendren'ny mpitsara sy ny tsy fahaizany ny fiasan'ny mili-pikarohana i Tubbydev:
Fa indrindra indrindra, ny tena loza raha ny hevitray tsy mihambo dia anatin'ny ampahan-teny navoakan'ilay tomponà trano fisakafoana: Saingy niakatra tao amin'ny voka-pikarohana Google ity lahatsoratra ity ..Google no mampiseho ny voka-pikarohana, miaraka / amin'ny alalan'ireo rijan-kajiny kanefa dia ny votoaty niaingàna no “voasazy”. Tsy misy mangataka amin'i Google hanitsy izany .. Ary raha ny fantatra dia tsy nisy fangatahana natao tamin'i Google. […]
Lasa Andriamanitra i Google na fara-faharatsiny, iray amin'ireo singan-javaboary…Tsy vitan'ny hoe MPANDOSITRA ANDRAIKITRA izy izany fa sady mbola misarika ny sivana sy ny olana miantefa any amin'ireo nitotonam-bitana tsara fandraisana ao aminy ihany koa ny heriny .. Tsy mivadika ve ny tany ?
Mampidi-doza, ny fanatsaràna ho an'ireo mili-pikarohan ? Izany no fandikan'ilay bilaogera amerikana Greg Sterling ao amin'ny computerworld [anglisy] :
Ny hany heloka, eto, dia ny fitanany laharana ambony loatra anatin'ireo voka-pikarohana.
Raha manome sosokevitra ny mba hananana fahamalinana anatin'ny tsikera i efficacitic.fr, i Elisabeth Porteneuve kosa, izay “ela nihetezana teo amin'ny Aterineto” hoy ny mombamomba azy ao amin'ny Twitter, maminavina fampiasàna ny zo hohadinoina :
Dingana manaraka: zo hohadinoina, fanesorana ny tsikera ao amin'ny Google amin'ny alalan'ny CNIL…ireo mpitsara ary ireo mpanao lalàna!
Raha mbola mampidy hevitra ireo vokatr'ity raharaha ity eo amin'ny fahalalahana miteny ao anaty Aterineto, miitatra hatrany kosa ny vokadratsin'ny dokambarotra teo nóho eo azon'ilay trano fisakafoana, ary mbola hita ao anatin'ny voka-pikarohana Google foana ilay adihevitra.